Thwebula Bitdefender Total Security 24.0.16.91 – Vessoft
WindowsUkuphephaUkuvikelwa okupheleleBitdefender Total Security
Ikhasi elisemthethweni: Bitdefender Total Security
I-Wikipedia: Bitdefender Total Security
I-Bitdefender Total Security – umkhiqizo wanamuhla wesi-antivirus ukuvikela kunoma yiziphi izinhlobo zendawo nezinethiwekhi ezisongelwayo. I-firewall emibili eyakhelwe ngaphakathi ilandelela ukuxhumeka okwenziwe isofthiwe efakiwe futhi inikeza ukulawula okuthuthukisiwe kokuxhumeka kwenethiwekhi. I-Bitdefender Total Security isebenzisa ubuchwepheshe bokuphepha bokuvikela ukuvikela i-PC ngesikhathi sangempela ngokumelene nanoma yiziphi izinsongo, ukuhlaselwa kwenethiwekhi, ugaxekile, kanye ne-ransomware. Isofthiwe isekela ukuskena kwesistimu okuphambili kokusongela okuqinile futhi ngokushesha isula noma ivimbela izinsongo ezinjalo, ngisho noma zingasebenzi. I-Bitdefender Total Security inikeza ukuvikelwa okunokwethenjelwa nedatha yobumfihlo, ngenxa yomphathi wephasiwedi eyakhelwe ngaphakathi, ukubethelwa kwefayela, ukuphepha kwe-inthanethi ephephile, imoduli yokulawula yabazali, ukuvikelwa kwe-webcam, VPN, njll. Bitdefender Total Security ine-interface elula yokusebenzisa futhi amathuluzi wokwenza okuzakhelwe ngaphakathi ukuthuthukisa ukusebenza kwe-PC.
I-Antispyware, i-antimalware, i-antiphishing
Ukuphepha kwe-inthanethi ephephile
Ukubethela ifayela ne-VPN
Thwebula Bitdefender Total Security
I-Bitdefender Antivirus Plus – umkhiqizo wesimanje we-antivirus ukuvikela ikhompyutha yakho ezingozini eziyingozi kakhulu, vimbela ukuhlaselwa iwebhu, ulwe nenkohliso futhi ugcine idatha yobumfihlo.
Amazwana ku Bitdefender Total Security
Bitdefender Total Security software ehlobene
Le antivirus eningi iqinisekisa ukuvikelwa komzimba ngezinhlobo ezahlukene zegciwane, ivimbela amawebusayithi we-phishing, ivikela inethiwekhi ye-WiFi futhi ibhala idatha yomuntu siqu.
I-F-Secure Internet Security – isoftware yakhelwe ukuvikela umsebenzisi ku-inthanethi, etholakala ngokuvimba amawebhusayithi anonya, ukuvikela ukuthengiselana ngokwezezimali nokuvikela ukulandwa kwamafayela ayingozi.
I-Ditto – isoftware yokunika amandla ibhodi yokunameka. Futhi, i-software ishintsha imininingwane ngenethiwekhi yendawo noma i-intanethi.
Isofthiwe ukubuka futhi uhlela PDF-files. Isofthiwe iqukethe amathuluzi anhlobonhlobo ukumisa umsebenzi ukuyedlula ne PDF-files.
Isigijimi esikahle sokuxhumana nabangani emhlabeni jikelele. Futhi isekela ukushintshaniswa kwamafayela, amakholi wevidiyo futhi uxoxe nabangani abavela ku-Facebook.